Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 05/07/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 05/07/2019
(နေပြည်တော်၊ ၅-၇-၂၀၁၉ ရက်)Verification of 22,432 Displaced Persons
At the Third Meeting of the Joint Working Group (JWG) on the Repatriation of Displaced Myanmar Residents from Bangladesh held in Dhaka, the Bangladeshi side handed over the list of 22,432 displaced persons to the Myanmar delegation.
As of2July 2019, the Immigration officials of Myanmar have already checked 18,331 displaced persons out of 22,432. In order to ensure the smooth repatriation, the breakdown lists (village-wise) of 2,976 displaced persons, who have been verified as those resided in Myanmar were sent to the Bangladeshi side in six batches as of 28 June 2019.
Union Minister Dr. Win Myat Aye receives British Ambassador to Myanmar
Naypyitaw July 4
Union Minister Dr. Win Myat Aye received British Ambassador to Myanmar Mr. Daniel Patrick Chugg at his ministry in Nay Pyi Taw on4July 2019.
During the meeting, they discussed on the implementation of recommendation on Rakhine issue, shut-down of IDP camps, social harmony and development in Rakhine State, ASEAN’s collaboration in repatriation of the displaced people
ဘင်္ဂလား‌‌‌‌ဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့သူများ ပြန်လည်ခေါ်ယူရေးဆိုင်ရာ မြန်မာ–ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တတိယအကြိမ်မြောက် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၂၂,၄၃၂ ဦးစာရင်းကို မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့အထိ နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၂၂,၄၃၂ ဦးအနက် ၁၈,၃၃၁ ဦးအား စိစစ်မှု ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအား နေရာချထားရာတွင် မြန်ဆန်ချောမွေ့စေရန် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ စိစစ်ပြီးသူများအား ကျေးရွာအလိုက် ပြန်လည်စာရင်းပြုစုပြီး အသုတ်အလိုက် ပေးပို့လျက်ရှိရာ ဆဋ္ဌမအသုတ်အထိ ကျေးရွာအလိုက် စိစစ်ပြီးသူ ၂,၉၇၆ ဦးစာရင်းအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ ၂၈-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး Mr. Daniel Patrick Chugg နှင့် အဖွဲ့အား ဇူလိုင်လ ၄ ရက်တွင် အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထို့သို့ တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု၊ IDP စခန်းများပိတ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေမှု၊ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူမှုသဟဇာတမျှတရေး ဆောင်ရွက်နေမှု၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။